Xiriir qoys ku imaanshaha FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan saameynta fayruska Korona ku yeeshay sharciga deganaanshaha ka aqri bogga InfoFinland Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland .
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan, sida lamaanaha loogu helo sharciga degenaanshaha Finland ayaa ku jira bogga InfoFinland Sharciga degenaanshaha lamaanaha .
Cunugga muwaadinka FinnishkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Cunugga muwaadinka ajnabiga ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Cunugga qofka helay megangelyada caalamiga ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Shuruudaha dakhliga noloha ee cunugga helay megangelyada caalamiga ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Mas'uulka muwaadinka Finnishka ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Mas'uulka muwaadinka ajnabiga ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Mas'uulka qofka helay megangelyada caalamiga ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Shuruudaha dakhliga noloha ee waalidka helay megangelyada caalamiga ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Ehelka kale ee muwaadinka Finnishka ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Ehelka kale ee qofka helay megangelyada caalamiga ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinland Isu diiwaangelin degene .
Haddii aad sharciga oggolaanshaha ee ugu horreeya aad Finland gudaheeda ka codsatay, xaq uma lihid in aad shaqayso illaa iyo inta oggolaanshaha lagaa siinayo. Marka aad hesho sharciga deganaanshaha ee ku salaysan xiriir qoys, waxaad xaq u leedahay in Finland ka shaqayso waxna ka barato. Boosaska shaqo ee bannaan waxaad ka raadsan kartaa bogagga boosaska shaqada ee internetka, jaraa’idyada ama adeegyada warbaahinta bulshada. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shaqo raadinta ka aqri bogga InfoFinland Shaqo ka helista Finland .
Waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale xaq u leedahay la qabsashada dalka iyo barashada luqada Finnishka ama Iswiidhishka. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan nolosha shaqada ee Finnishka iyo la qabsashada waxaad ka heleysaa bogagga: Shaqo iyo ganacsi iyo Degidda Finland .